Ny iPad Mini dia efa napetraka amin'ny dashboard an'ny fiara | Vaovao IPhone
Rehefa nampahafantatra ny iPad Mini i Apple, ny zavatra voalohany tonga tao an-tsainao dia ny fitaovana iray an'ny refy tonga lafatra entina ao anaty fiara, indrindra raha tsy manana GPS. Ity efijery 7,9-inch ity dia tsy lavitra ny fiara mandeha ankehitriny.
anefa iPad Mini kinova misy GPS mpandray mbola tsy amidy, mpampiasa iray dia efa nanamboatra ny dashboard an'ny fiarany hahafahany mampiditra ilay takelaka ary hampiasa azy io ho ivon-haino aman-jery. Azoko antoka fa hapetraka ao amin'io lavaka io ny kinova GPS raha vantany vao misy io.
Ny varotra aoriana koa tsy ho ela hanaterana namanaraka ny vahaolana izay tsy mitaky fanovana ny atin'ny fiara, zavatra izay tsy ny olona rehetra no te hanao. Mikasa ny hividy iPad Mini hampiasaina manokana ao anaty fiara ve ianao?
Fanazavana fanampiny - Apple dia mandefa ny doka fahitalavitra voalohany ho an'ny iPad Mini
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny iPad Mini dia efa napetraka ao amin'ny dashboard an'ny fiara
Tsy sarotra ny mamoaka azy io, miankina amin'ny fiara anananao izany, ny marika fiara sasany no mety mihevitra an'io safidy io. Izaho manokana dia hitako fa lany andro ny fananana radio sy mpamaky CD ao anaty fiara. Tsy zava-baovao izany, taona maro lasa izay, maro no nametraka ATX tao anaty fiara, miafina amin'ny alàlan'ny mason'ny masoandro ny klavier, ka amin'izao fotoana izao dia tsy zavatra tokana izany, azon'ny rehetra atao, azon'ny eritreritra kely fotsiny, mikaroha kely amin'ny Internet dia vorio. Miankina amin'ny fiara anananao io, mety ho mora na be loatra ny manana azy io ho tsara tarehy.
TinyUmbrella dia nohavaozina miaraka amin'ny fanohanan'ny iOS 6.0, 6.0.1, iPad Mini, iPad 4
Redsn0w 0.9.15b3: iOS 6.0.1 nanidy jailbreak tamin'ny fitaovana A4 sy teo aloha